पर्यटन व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न सडक खाना महोत्सव
रविन्द्र प्रताप गुप्ता ३० चैत।
भैरहवा । नयाँ वर्षमा धेरै शहरहरु झिलीमिली तथा रमणीय हुदाँ केही वर्ष अघि सम्म गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्धारमा रहेको भैरहवा भने प्राय सुनसान हुन्थ्यो । अरु बेला जस्तै समंसाझैमा बजार बन्द हुन्थ्यो । तर विकासको गतिलाई पछ्याउदै गएको भैरहवामा पछिल्लो समय नयाँ वर्षको स्वागतमा नीनि क्षेत्रबाट समेत विभिन्न कार्यक्रमहरु हुने गरेका छन्, ।
त्यस्तै एउटा ब्राण्ड स्थापित भइसकेको छ, भैरहवामा सडक खाना महोत्सव । यहाँका उद्योगी व्यवसायीका संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष पालैपालो सडक खाना महोत्सव गर्दै आएका छन् । जसका कारण भैरहवाको रौनकता मात्र थपिएको छैन, नयाँ वर्ष मनाउनकै लागी यहाँबाट बाहिरिने नगरवासीलाई समेत रोकेको छ । छिमेकी भारत र स्वदेशकै अन्य स्थानका पर्यटकलाई समेत नयाँ वर्षमा भैरहवाले आकर्षित गरेको छ ।
यस पटक पनि ‘सडकमा जाऔं, सडकमा खाऔं, सडकमै रमाऔं’ आन्तरिक पर्यटकको प्रबद्र्धन गरौं, भन्ने नारा सहित उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीको आयोजना, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संगठन रुपन्देही, सिद्धार्थ होटल एशोसिएसन र मदिरा व्यवसायी संघ, रुपन्देहीको आयोजनामा यही चैत ३० गते सडक खाना महोत्सव हुँदैछ । महोत्सवलाई भव्य बनाउन आयोजकहरुले विभिन्न समितिहरु गठन गरेर तयारी तीव्र पारेका छन् । यसै परिपेक्षमा हामीले महोत्सव संयोजक तथा उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका कोषाध्यक्ष सचिन रोक्कासंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशंः
सडक खाना महोत्सव आयोजना गर्नुको उद्धेश्य के हो ?
नेपाली नयाँ वर्षको स्वागत गर्नका लागि हामीले सडक खाना महोत्सव तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं । भैरहवाको देवकोटा चोक देखि बसपार्क क्षेत्रमा आयोजना हुने महोत्सवमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न, बसाइ लम्ब्याउन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पनि महोत्सव गर्न लागेका छौं ।
सडक खाना महोत्सवले एक दिन मात्र भए पनि नेपाली तथा विदेशी पर्यटकलाई खानामा फरकपन दिनेछ भने सडकमै केही समय भए पनि रमाउन मद्धत गर्ने कुरामा विश्वत छौं । यसका साथै भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्धार भैरहवालाई चलायमान गराइराख्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि सडक खाना महोत्सव तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
सडक खाना महोत्सवमा कति जनालाई भित्र्याउने लक्ष्य रहेको छ ?
सडक खाना महोत्सवमा ३० हजार भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छाैँ । महोत्सव अवलोकनका लागि भैरहवा सहित मर्चवार, धकधई, लुम्बिनी, सुर्यपुरा, छपिया, बुटवल, नवलपरासी, कपिलवस्तु, छिमेकी मुलुक भारत लगायतका क्षेत्रबाट समेत आउने अपेक्षा गरेका छौं । यहाँ बढी आउने भनेकै भारतीय पर्यटक हुन्, त्यसैले हामीले जतिसक्दो भारतीय पर्यटकलाई भित्र्याउने प्रयास गरेका छौँ । भारतीय पर्यटकको सुविधाका लागि मध्यनजर गर्दै भारतीय बेलहियामा हेल्प डेस्क समेत सञ्चालन गर्नेछौं ।
महोत्सवमा कतिवटा स्टल रहनेछन् ?
साँझ ५ बजे देखि मध्यराती १२ बजे सम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा तारे र सामान्य होटलका गरी ५० भन्दा बढी स्टलहरु रहनेछन् । महोत्सवमा स्थानीय खाना सहित थारु, गुरुङ, विभिन्न आमा समूहले बनाएका परिकार लगायत सांस्कृतिक खानाका परिकार समेत राखिनेछ । त्यस दिन महोत्सव अवलोकनका लागि आउने दर्शक तथा पर्यटकहरुले घरमा गएर खाना पकाउनुपर्ने छैन् । सडकमै बनाइएको खाना खाएर मज्जा लिन सबैलाई आग्रह गर्दछौ ।
महोत्सवमा स्टल राखेवापत कति शुल्क तिर्नुपर्छ ?
हामीले ५० वटा बढी स्टल राख्न दिनेछौं । स्टल शुल्क वापत कुनै रकम तोकिएको छैन । तर सरसफाई शुल्क वापत प्रतिस्टल १ हजार रुपैंया तोकिएको छ । सो रकम महोत्सव सम्पन्न भए पश्चात सरसफाइका लागि खर्च गरिनेछ ।
सडक खाना महोत्सवसंगै वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, कुन कुन कलाकारको प्रस्तुती रहनेछ ?
सडक खाना महोत्सव आफैमा पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न र यस क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमलाई थप रमाइलो बनाउनका लागि वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका छौं । कार्यक्रममा राष्ट्रिय ख्यातीप्राप्त कलाकार रमेशराज भट्टराई र एञ्जिला रेग्मीको विशेष प्रस्तुती रहनेछ । त्यस्तै स्थानीय कलाकार, डिजे तामा, भोजपुरी, भारतीय पाहुनाको गीत तथा नृत्य र विद्यालयस्तरीय प्रस्तुती समेत राखिएको छ ।
महोत्सवमा कतिको कारोबार हुने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?
महोत्सवमा करिब ३० हजार बढी दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै महोत्सवमा करिब ५० लाखको कारोबार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । महोत्सवमा आउने विभिन्न देशका २० पर्यटकलाई सम्मान गर्ने तयारी छ । यहाँ आउने दर्शक तथा पर्यटकहरु नठगिउनु भनेर हामीले अनुगमन गर्नेछौ । जसका लागि अनुगमन समिति समेत बनाएका छौं । सबै स्टलहरुलाई खानाका परिकारको मेनु अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ भने स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरी शान्ति सुरक्षाको प्रबद्र्धन समेत मिलाएका छौँ ।